| लगातार बढ्दै काभ्रेमा आत्महत्या, किन गर्छन् मान्छेले आत्महत्या ?
लगातार बढ्दै काभ्रेमा आत्महत्या, किन गर्छन् मान्छेले आत्महत्या ?
मेचीकाली : 2017-08-08 08:20:27
एक बर्षमै १ सय ११ जनाले गरे आत्महत्या
पछिल्ला वर्षहरुमा काभ्रेमा आत्महत्या गर्नेको संख्यामा बृद्धि आएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको विगत तीन वर्षको तथ्याङकलाई तुलना गर्दा जिल्लामा आत्महत्याको संख्या बढ्दो छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक सय ११ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
जसमा विष सेवन गरेर आत्महत्या गर्ने ४७ जना र झुण्डिएर ६५ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विष सेवन गरेर ३४ र झुण्डिएर ५९ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङकले देखाएको छ । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ५० जना महिला, ५७ जना पुरुष, १ बालक र तीन बालिकाले आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा गत साउन महिनामा मात्रै १७ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । उक्त महिनामा विष सेवन गरेर ८ जना र झुण्डिएर ९ जनाले आत्महत्या गरेका हुन् ।
यस्तै जेठ महिनामा १४ जना जसमा विष सेवनबाट ६ जना र झुण्डिएर ८ जना, फागुन महिनामा १२, कात्र्तिक महिनामा ११, भदौ र असार महिनामा ९/९ जनाले विष र झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा काभ्रेमा ९३ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । जसमा विष सेवन गरेर ३४ र झुण्डिएर ५९ जना रहेका छन् । २०७२/०७३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ७३/७४ मा १८ जना बढीले आत्महत्या गरेका हुन् । प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा करेन्ट लागेर ६ जना, हातहतियारबाट एक जना र डुबेर ६ जनाको ज्यान गएको छ । घरपरिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण आफ्ना परिवारको आवश्यकता पुरा गर्न नसक्नु, आफुले सुरु गरेको काममा सफलता हाँसिल नहुनु र घरपरिवार तथा नजिकको मान्छेलाई घुर्की देखाउनका लागि समेत आत्महत्या हुने गरेको छ ।